Fandalinana tranga amin'ny marketing: Afaka manao ny marina ve isika? | Martech Zone
Talata, Desambra 3, 2019 Talata, Desambra 3, 2019 Douglas Karr
Miasa ao amin'ny indostrian'ny SaaS mandritra ny fotoana lava, manohy mimenomenona aho rehefa misintona sy mamaky fanadihadiana tranga. Aza diso hevitra aho, niasa tamin'ny orinasa marobe aho izay nahitanay mpanjifa manao zavatra mahatalanjona amin'ny sehatra misy anay na nahavita vokatra tsy mampino… ary nanosika sy nandroso ny fanadihadiana momba azy ireo izahay.
Ny marketing dia tsy ny fahazoana vola fotsiny. Ny marketing dia ny famaritana ny vinavina tsara, ny fanomezana azy ireo ny fikarohana ilainy hividianana fividianana, ary avy eo mitazona ireo mpanjifa tsara izay mampitombo ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing.
Ny fametrahana tsy ampoizina avy amin'ny client fluke dia tsy varotra tsara fa mitovy amin'ny dokambarotra diso - raha tsy hoe voasoratra manorina sy marina.
Torohevitra momba ny fanoratana fandinihana tranga lehibe
Tsy milaza aho hisoroka ny fandinihana tranga ataon'ny mpanjifa izay nahazo valiny lehibe. Heveriko fa paikady lehibe tokoa ny hizara tantaran'ireo mpanjifanao izay nahazo tombony na notompoin'ny vokatrao na serivisinao. Fa amin'ny fanoratana ny fandinihana tranga dia mila mitandrina ianao amin'ny fametrahana ny andrasana amin'ny mpanjifanao manaraka… na ny mpanjifa izay mampiasa ny fandinihana tranga hanodinana ny fanapahan-kevitry ny ekipa anatiny. Ireto misy torohevitra vitsivitsy:
Background - manomeza ambangovangony momba ny mpanjifa sy izay ezahin'izy ireo hotanterahina.
Loharano mpiasa - miresaka amin'ireo loharanon-talenta anatiny sy ivelany izay nampiharin'ny mpanjifa izay nanampy tamin'ny fanatontosana ireo vokatra mahavariana.
Famatsiam-bola - miresaka momba ny tetibola anatiny nampiharina tamin'ilay hetsika.
fotoana - Ny fizaran-taona sy ny fizotry ny fotoana matetika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahombiazan'ny fandraisana andraikitra. Aza hadino ny mizara azy ireo ao anatin'ny fandalinanao tranga.
Average - apetraho amin'ny valiny antonony ny vokatra ho tratran'ny mpanjifa raha tsy misy ny talenta, teti-bola ary ny fetr'andro nampiharin'ity mpanjifa ity.
Bala sy antsoantso - aza hadino ny manondro rehetra ireo singa nahatonga ny vokatra ambony.
Ny filazana ny mpanjifa nahazo valiny 638% amin'ny fampiasam-bola dia fandalinana tranga tsara hizarana… fa ny fametrahana ny andrasana amin'ny fomba nahatratraran'izy ireo izany mihoatra ny vokatrao sy ny serivisinao no zava-dehibe kokoa!
Setting andrasan'ny paikady fitsikerana ny fitomboan'ireo mpivarotra fihazonana ary ny lanja mandritra ny androm-piainana isaky ny mpanjifa. Raha mametraka fanantenana tsy ampoizina tsy vitan'ny mpanjifa antonony ianao dia hanana mpanjifa tezitra. Ary marina izany, raha ny hevitro.
Angano, hevi-diso ary famoahana
Tena manantena aho fa mankafy ny Angano, hevi-diso ary famoahana andiany izay efa niarahanay niasa! Misarika ny sain'izy ireo amin'ny fantsona sosialy izy ireo ary tiako ny ezaka apetrak'ireo mpiara-miasa amin'ny famokarana ao amin'ny Ablog Cinema ao anatin'ity andiany ity.
Ity misy Transcription:
AJ Ablog: [00:00] Doug, zahao io. Ka nahita ity fandinihana tranga ity aho, ary nividy ireto tsaramaso majika ireto aho.
Douglas Karr: [00:06] Tsaramaso majika?
AJ Ablog: [00:06] Ireto tsaramaso kafe majika ireto, eny. Tokony hanasitrana homamiadana izy ireo.
Douglas Karr: [00:10] Manana tsaramaso kafe manasitrana homamiadana ianao?
AJ Ablog: [00:12] Manana tsaramaso kafe aho, eny. Jereo? Vakio fotsiny dia vakio fotsiny.
Douglas Karr: [00:16] setroka masina. Manasitrana homamiadana. Solaola lahy. Fihenan'ny erectile. Mitohana. Mampatahotra eo amin'ny sehatra
AJ Ablog: [00:23] Mamaha ny Count [Choculitis [00:00:24] ihany koa io.
AJ Ablog: [00:27] Tsia, sarimihetsika izany. Mpanohana ny sarimihetsika no manohana azy.
Douglas Karr: [00:30] Haingam-pandeha amin'ny Internet? Manontany tena aho hoe iza no nanoratra an'io tranga io.
AJ Ablog: [00:34] Tsy haiko, vao hitako io, novakiako, ary mazava ho azy fa marina izany.
Douglas Karr: [00:37] Ahoana ny fomba fiasany?
AJ Ablog: [00:39] Mbola tsy nanandrana aho.
Douglas Karr: [00:41] Andao handeha hanao kafe.
AJ Ablog: [00:43] Eny ary, andao hanao izany.
AJ Ablog: [00:51] Tongasoa eto amin'ny angano-
Douglas Karr: [00:52] Hevi-diso-
AJ Ablog: [00:53] Ary i Rants, ilay seho tianay sy Doug hiresaka momba ny zavatra amin'ny Internet izay tena manaitra anay.
Douglas Karr: [00:59] Ie, ary ny seho anio dia momba ny fampanantenana, fampanantenan'ny orinasa amin'ny fandinihana tranga.
AJ Ablog: [01:05] Toy ny fampanantenan'ny dadanao fa tsy tanteraka.
Douglas Karr: [01:10] Maizina izany. Fa hitanao izany isan'andro, indrindra fa amin'ny rindrambaiko be dia be aho, noho izany dia manampy ireo orinasan-rindrambaiko aho. Ary raisin'izy ireo ilay mpanjifa iray, nahazo valiny tsy manam-paharoa iray izy ireo tamin'ny fampiasana ny rindrambaiko ary hoy izy ireo, “Andriamanitra ô, mila manoratra izany izahay amin'ny fandinihana tranga iray.” Noho izany dia azonao ity fandinihana tranga ity, ary izany no nampitomboan'ity rindrambaiko ity ny fiverenany amin'ny 638% na inona na inona. Ary ny tena izy, mety manana mpanjifa an'arivony ve izy ireo, ary mpanjifa iray no nahazo an'io valiny io. Tsy avelantsika any an-toeran-kafa izany. Tsy avelanay ny tobim-panafody fa misy mararin'ny homamiadana izay naka aspirine raha vantany vao lasa ny homamiadany, ary nilaza hoe, "Hey, manasitrana homamiadana ity aspirinina ity." Tsy hanaiky izany mihitsy izahay, fa noho ny antony sasany amin'ny fandinihana tranga dia avelantsika hatrany izany. Ary ny olana dia misy orinasa sy mpanjifa mandeha any mamaky ny fandinihana tranga, ary izy ireo-
AJ Ablog: [02:15] Tsy tena fantany.
Douglas Karr: [02:16] Eny, tsapan'izy ireo fa fahamarinana izany, toy ny orinasa tsy avela handainga.
Mpiresaka: [02:21] Tsy lainga izany raha mino an'io ianao.
Douglas Karr: [02:24] Ary tsy mandainga ny orinasa.
AJ Ablog: [02:27] Saingy tsy milaza ny marina rehetra aminao izy ireo.
Douglas Karr: [02:29] Marina. Karazan'izy ireo mampiasa fotsiny ity tranga tsara indrindra ity. Angamba sehatra varotra na zavatra hafa izy ireo ary nanana ekipa marketing tsara izy ireo, ary io no vanim-potoana nahazoan'izy ireo ny orinasa betsaka indrindra, ary ny mpifaninana aminy dia niala tamin'ny asany fotsiny, ary nilatsaka fotsiny ny vidiny. Ary noho izany rehetra izany dia nitambatra nampitombo ny valiny tamin'ny 638%.
AJ Ablog: [02:52] Marina, na toy ny orinasan-dahatsary milaza hoe: “Hey jereo, jereo ny hatsaran'ny fampielezan-kevitr'ity fampielezan-kevitra ity,” afa-tsy ilay marika efa manana mpanaraka tsara. Nanao izay tokony hataony teo amin'ny fiaraha-monina izy ireo. Tsy ilay horonan-tsary akory izy io, fa ny zavatra hafa rehetra natambatra taminy, ary avy eo dia noporofoin'izy ireo ny fitenenana hoe: “Oh, jereo ny zavatra nataon'ny video-ko ho anao.”
Douglas Karr: [03:12] Marina. Ka hiteny fotsiny aho fa amin'ny maha orinasa anao, ny iray amin'ireo olana sendra anao midina any ambanin'izany dia rehefa apetrakao amin'ireo mpanjifa ireo andrasana lehibe ireo, rehefa tonga eo am-pamakiana io tranga io ny mpanjifa ary manantena izany karazana fampisehoana izany.
AJ Ablog: [03:31] Io valiny io ihany, eny.
Douglas Karr: [03:32] Ary noho izany ireo orinasa ireo dia mandany fotoana betsaka ireny fandalinana tranga ireny any ivelany, tena reharehany izany, manomboka manao raharaham-barotra aminy izy ireo, ary avy eo dia mahazo mpanjifa diso fanantenana. Ary noho izany ny ahy dia, raha hanao fandalinana tranga ianao dia tsy milaza aho hoe aza mampiasa iray izay nahazoana valiny miavaka.
AJ Ablog: [03:47] Marina, ary be dia be ny fandalinana tranga tsara any.
Douglas Karr: [03:49] Ie, fa mahitsy amin'ny fandinihana tranga. “Hey, tsy ity no karazana valinteny mahazatra azontsika. Tsy ireo karazana valiny mahazatra ireo. Ireto misy antony telo nahatonga ny fitomboana ankoatry ny lampiharanay na ankoatry ny rindrambaiko. ”
AJ Ablog: [04:04] Marina. Manaova ny marina ary apetraho ny fanantenana.
Douglas Karr: [04:06] Ie, milaza ny marina fotsiny. Heveriko fa ny fandinihana tranga iray dia fotoana iray tsy mampino hanabeazana ny mpanjifanao manaraka na ny fanantenanao manaraka amin'ny mety, fa tsy ny ho fanao mahazatra.
AJ Ablog: [04:20] Marina, tsy anisan'ireo mpanao dokambarotra tamin'ny 3:00 maraina ianao nilaza hoe: "Hitranga aminao io isaky ny mandeha io satria izany no ataonay."
Ara-barotra: [04:29] Ary ny zavatra mahafinaritra momba ireo katanas fanao… oh, tena naratra izany. Oh. Mandratra fotoana be izany. Sombin'izay, ny tendrony ihany no nahazo ahy, Odell.
Douglas Karr: [04:40] Ho an'ny mpanjifa sy orinasa mamaky fandalinana tranga, azafady mba alao izy ireo miaraka amina masira na aorina any aoriana. Raha misy miteny hoe: "Mahazo karazana ROI 638% izahay" dia avereno indray ary lazao hoe: "Inona ny ROI antonony azonao amin'ireo mpanjifa?" Ary avy eo ho an'ireo orinasa namoaka ireo fandalinana tranga ireo dia apetraho fa ity dia vokatra miavaka izay azon'ireto tovolahy ireto, saingy tsy maintsy holazainay aminao ny momba izany satria namorona tokoa izy io, ary ireto ny antony hafa rehetra nandainga tao. Ary izao ny ataonao dia manampy ny mpanjifanao manaraka ianao ary miteny hoe: “Hey, tiako ny hahazo ny valiny azon'izy ireo. Fantatro fa mety tsy hahazo ireo isika, saingy jereo, rehefa nanao an'ity, ity, ity, ary ity- "
AJ Ablog: [05:24] "Ary afaka nanao zavatra nitovy-"
Douglas Karr: [05:26] “Afaka nanao zavatra nitovy tamin'izany izahay ary nampitombo ny valinay,” ary heveriko fa…… miala amin'ity kalesy ity mba hanehoana ny valim-panadinanao farany tsara indrindra ary apetraho amin'ireo mpanjifanao sy ny zavatra tsy ampoizinao. Ary avy eo ho an'ireo orinasa sy mpanjifa izay mividy, aza misalasala. Aza misalasala amin'ireo fandinihana tranga ireo.
Mpiresaka: [05:49] Azoko ampahiratina ny masonao. Azoko ampahiratina ny masonao.
AJ Ablog: [05:57] Nisy fotoana ve ry zalahy rehefa voafitaky ny fanadihadiana tranga na dokam-barotra tamin'ny karazana fahatsapana toa izany ianao? Tiako ny maheno azy ireo amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany. Raha tianao ity horonantsary ity dia alao antoka fa tianao sy misoratra anarana ianao, dia ho hitanay ianao amin'ny horonan-tsary manaraka.
Tags: lainga fandinihanaLahatsary Marketingangano